Wednesday June 23, 2021 - 09:24:24 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q:- Cabdirashiid Axmed Guuleed
Tusaale ahaan haddii wiil ama gabadh aad diinta u bartay/baratay kuna dhaqma/dhaqanta loo dhiibo mansab sare waxa dhacaysa inuu shaydaanku la galo dagaal ciriyo dhul ah (sidii kii uu la galay Nebi Adam cs) si uu kaadhka uga wasakheeyo oo markaa indhaha bulshadu ku soo jeestaan oo si dhakhso ah looga waayo dhawrsoonaantii markii hore lagu bartay. Sideedabana shaydaanku laba aaladood buu adoomaha Alle swt uu ku duufsadaa labadaasina waa awooda siyaasadeed iyo awooda maaliyadeed. Markaa ruuxii wadaadka ahaa hadduu labadaa midkood gacanta ku dhigo waxa isla markaaba u bilaabmaya dagaalkii mr Shaydaan. Hadaba dagaalka shaydaan waa ayo cidda u jilib dhigi kartaa? Waxa dagaalkaa libin kasoo hoyn kara ruuxii marka horeba aqoon xeeldheer oo dheelitiran Rabbi ku manaystay. Ruuxii markiisa horeba aqoontiisa diineed ay yarayd ama camalfalkiisa dhanka diintu uu hooseeyey ama aanu jirinba (sida uu siyaasiga Soomaaliyeed u badan yahay) isagu awooda siyaasadeed inuu ku takrifalo isla markaana aanu musuqa iskaba ilaalin ayay u badan tahay, markaana shaydaan waa intuu doonayay umana baahna inuu ruuxaa dagaal lagalo.